चक्रघट्टी/ कोभिड १९ भाइरसले अहिले नेपाल लगायत सारा विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिनबाट बच्न गरिएको लकडाउनले मानिसको व्यापार, रोजगारी, शिक्षाजस्ता विभिन्न क्षेत्र लगायत दैनिक जीवनलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । यसबाट नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील विषय पनि अछुतो रहन सकेको छ्रैन । लकडाउनले पु¥याएको असर बारे बुझ्न वराहक्षेत्र नगरपालिकाको महेन्द्रनगर चक्रघट्टीस्थित स्वास्थ्य चौकी पुग्दा त्यहाँ अरु दिनको भन्दा बढी नै भीड देखिन्थ्यो । सेवाग्राहीहरु कोही लाइनमा थिए त कोही पर चौतारीमा बसेर पालो कुरिरहेका थिए । अनि, स्वास्थ्यकर्मीहरुको दौडधूप पनि त्यतिकै थियो
रिदमको लकडाउन अभियान
विराटनगर । लकडाउनमा युवाहरु के गर्दैछन् ? आम रुपमा उठ्ने यो प्रश्नको जवाफ सहज छैन । कोही घरभित्रै छन् । कोही खासै काम नभएर बसेका छन् । कलेज बन्द भएर कतिपयलाई हाइसन्चो पनि होला । लकडाउन केही खुकुलो भएको छ तर युवासंग सम्बन्धित गतिविधिहरु भने अझै सूचारु भएका छैनन् । विराटनगर–७ का युवा रिदम साह भने लकडाउनको सदुपयोग गर्दै युवाहरुलाई नै जानकारी दिन भर्चुअल माध्यमको प्रयोग गरी विभिन्न बहस चलाइरहेका छन् । उनको यो अभियान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति प्राप्त भएका व्यक्तित्वहरुसंग भई रहेको छ । अनि अभियानमा जोडिएका छन् रिदम जस्तै सयौं युवा । कार्यक्रम हो ‘द युथ टक’ । रिदम वि
रोहित कुमार लुइटेल
खुशी ल्याउँदै गर्दा अल्मलिएको धरानको खानेपानी
धरान/ धरानमा खानेपानीको समस्या सुरु भएकोे झण्डै तीन दशक भइसके पनि यो समस्या अझैं समाधान भइसकेको छैन । धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दू जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण तथा यसको र अन्य मुहानहरूको पनि संरक्षण हुन नसक्दा खानेपानीका स्रोतहरू सुक्न थालेपछि खानेपानीको अभाव झन् बढ्दै गएको हो । भएका मुहानहरू सुक्दै जाने र जनसङ्ख्याको चाप बढेर खानेपानीको माग बढ्दै जाने भएपछि समस्या थपिनु स्वाभाविक हो । समस्या चर्किंदै गएपछि यहाँ खानेपानीको वैकल्पिक उपाय खोज्न थालियो । नगरवासीको दवाब र राजनैतिकदलहरूको प्रयासबाट एकीकृत शहरी विकास आयोजना मार्फत एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) समस्या समाधानगर्न इच्छुक भयो । यसै य
‘अबको निति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र रोजगारीमै केन्द्रित हुन्छ ’
सबै स्थानीय तहले असार १० गते सम्म नगरसभाको तयारी गरिरहेका छन् । नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रमहरु तय गर्नेछन् । विश्वभरी नै फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण कतिपय स्थानीयहरुको आन्तरिक स्रोत गुमेको अवश्था छ भने कतिको उद्योग कल कारखानानै नचल्दा बेरोजगारीको संख्या पनि बढेको छ । यस्तो अवश्थामा पनि सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाले असार १० गते नगर सभा गर्दै आगामी वर्षको निति तथा कार्यक्रमको तयारीमा लागेको छ । यसै बिषयमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख निलक खनाल संग नगरसभाको तयारी र निति तथा कार्यक्रमहरुका विषयमा कोशीपत्रले गरेक
‘कृषि केन्द्रित निति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’
लामो समय देखि जनप्रतिनिधी विहिन रहेको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधी पाएको पनि करिब ३ वर्ष पुग्नै लागेको छ । जनताले निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधीहरुबाट समाज, गाउँ, शहरको विकाश हुने अपेक्षा गरेका छन् । जनप्रतिनिधीहरुले पनि आफ्ना प्रतिबद्धताहरु जनता समक्ष गरेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकामा दुइटा पार्टीले स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको छ । करिब अढाई वर्ष नेकपाले नेतृत्व गर्यो भने गत मंसिरको उपनिर्वाचन पछि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । यस बिचमा धरानको विकाश निर्माणले कुन मोड लियो ? धरानको समसामयिक विषयवस्तुहरुमा नेकपाका धरान नगर अध्यक्ष नारायण सुवेदी सँग कोशीपत्र अनलाईनका लागि संजोगबाबु दाहालले गरेको कुराकानी
क्वारेनटाइनको अर्थ र यसले सिकाउने पाठ
चार महिना पहिले, कोभिड १९ हजारौं माईल टाढा थियो, जुन हाम्रो आफ्नै जीवनबाट टाढा देखिन्थ्यो। तीन महिना पहिले, हामी गनगनहरू सुन्न सक्थ्यौं । तर हामीले कल्पना गर्न सक्दैन थियौं कि, यो त्यस्तो हदसम्म पुग्छ र र हामीलाई स्तब्ध पार्छ भनेर । दुई महिना अघि, सबै परिवर्तन हुन थाल्यो, र दैनिक, कोभिड १९ ले हामीबाट अधिक मानिसको ज्यान लिन थाल्यो। कोभिड १९ ले ठुलो आँधीबेहरीको रूप लियो । आँधीबेहरी हट्छ तर महामारी हट्न धेरै समय लाग्छ । कोरोना भाइरसले हामीलाई आश्चर्य चकित पार्यो । कसैले पनि भविष्यवाणी गरेका थिएनन कि यसले यति धेरै मानिसलाई मार्नेछ, देशहरुलाई लकडाउन गर्न बाध्य पार्नेछ, स्कूल, कलेज र सार्वजनिक ठाउँ
अब होटल ओपन बजेटमा चलाउनु पर्छ
धरान । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण पर्यटन व्यवासाय धरासयी बन्दै गएको छ । पर्यटन व्यवसाय सँग जोडिएका सबै व्यवसायहरु जोखिममा रहेका छन् । यसै बिच सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले गरेको छलफलमा पर्यटन व्यवसाय धराशायी भयो भनेर अतालिनु भन्दा पनि लकडाउन पछि होटलहरु ग्राहक सँग भएको रकम अनुसार ओपन बजेटमा संचालन गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय पर्यटनविद राज बसुले सुझाव दिएका छन् । संघले जुम एप्लीकेशनको माध्यमबाट विभिन्न पर्यटन व्यवसायीहरु सहित पर्यटनविद बसुसँग छलफल चलाएको थियो । संघद्वारा शुक्रबार कोभिड – १९ ले पर्यटनमा पारेको प्रभाव र आगामी प्रयास” कार्यक्रममा वक्ताका रु
यातायात मजदुरहरु राहतबाट बञ्चित
धरान । कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन आज सम्म ५२ दिन पुगिसकेको छ । नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गए पछि अझै कति दिन लम्बीने अझै टुङ्गा लागेको छैन् । यस्तो अवश्थामा सबै भन्दा बढी यातायात मजदुरहरु प्रभावित बनेका छन् । एकातिर सरकारले दिएको राहत पाउन सकेका छैनन् भने अर्को तिर रोजगारीनै गुमे पछि दैनिकीमा समस्या थपिदै गएको छ । यातायात मजदुरहरु दिनभरी काम गरेर बेलुका पाएको भत्ताले जिविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरु हुन् । चैत्र ११ गते देखिको लकडाउनका कारण जिविकोपार्जनमा समस्या बढ्दै गएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन धरान नगर समितीका अध्यक्ष कमल भट्टराई बताउँछन् । दैनिक ज्याल
कांग्रेसले शुरु गरेको दुई सयको क्रान्ति ७० बर्ष हुँदा
आज भन्दा ७० बर्ष पहिला नेपालमा राणाहरुको शासकीय दासत्व बाट जनतालाई मुक्त गरि जनतालाईनै मालिक बनाउने अभिप्रायले जनताको शासन स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेसले राणा बिरोधि क्रान्तिको शुभारम्भ गर्यो । बिक्रम सम्वत २००७ साल कार्तिक २६ गते भाइटिकाको दिन कांग्रेसले थीर बल मल्ल र पूर्ण सिंह खबासको कमान्डिङ्गमा दुई सय जनमुक्ति सेनालाई रातारात युद्ध मैदानमा तैनाथ गर्यो । तत्कालीन राणा शासकहरुले जनता माथी गरेको अन्यायका विरुद्धमा उत्रन आम जनता आतुर भएका बेला राणा बिरोधी संघर्षमा जाने बाटो खोजीरहेका आक्रोशित जनतालाइ कांग्रेसले बाटो देखाइ दियो । राजा त्रिभुवन राजगद्दी त्याग गरेर भारत गएको मौका छोपेर कांग्रेसल
१९६० को दशकमा नेपाल र दक्षिण कोरियाका नागरिकको प्रति ब्यक्ति आय बराबर थियो । अहिले दक्षिण कोरियाको प्रतिब्यक्ति आय २५ हजार डलरमाथि पुगिसकेको छ भने हामी नेपालीको अबस्था कस्तो छ आत्म मूल्यांकन गर्नु पर्ने समय हो यो । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो भएन भने राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मान अभिवृधि हुन सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलम्बी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडा व्यहोर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रम केलाउँदा थाहा हुन्छ । अर्थात कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाम मात्रको सार्वभौम सम्पन्न हुन्छ । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनताको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पर